Barnaamijkii ka baxay SVT ee xaaladda Soomaaliya ku eegayey oo “wel wel soo kordhiyey” - iftineducation.com
aadan21 / December 2, 2016
iftineducation.com – Iyadoo Noorweey ay in muddo ah ku jirty u kuura gelida xaaladda Soomaaliya iyo siddii ay u celin laheyd soomaali gaaraysa 1.600 oo sharciyada kala noqonayo, ayaa hadana waxaa jira wel wel iyo cabsi la soo deristay soomaalida Iswiidhan ku dhaqan ee qudhooda aan sharciyada laheyn.
Cabsidan ayaa timid ka gadaal markii telefeyshinka SVT ee barnaamijkiisa Korrespondenterna (warbixinada weriyeyaasha) ay socodaal ku tageen qeybo ka mid ah Soomaaliya oo lugu eegayey xaaladdaha isbadal ee dhinac kasta leh.
Soomaali badan oo cabsi iyo wel wel la soo gudboonatay markii ay daawadeen barnaamijkaas xirriir la soo sameeyey shabakada caanka ah somaliska.com, ayaa sheegay in “Barnaamijkaasi u muuqdo mid loogu kuura geliyo siddii loo celin lahaa soomaalida aan weli sharciyada la siin.
Dadkaan ayaa sidoo kale sheegay in dowladda haatan jirta tee Soomaaliya tahay dowlad dafiic ah oo aan eegeyn xaaladaha dhabta ah ee soomaalida qurbaha ku sugan, kana fekereeyso oo keliya sidii ay u heli laheyd dhaqaalo waa sida ay hadalka u dhigeen e. Inkastoo aan la oran karin barnaamijkaasi waxaa uu wax ka badalaya siyaasadaha magangalyo doonka ee dalka u yaala, hadana kama duwana barnaamijyo hore oo warbaahinta caalamka qaarkood ka diyaariyaan xaaladaha adag ee soomaaliya balse soomaali badan oo sharci laawayaal ah oo reer Iswiidhan ah ayuu ku abuuray walaac hor leh.
Si kastaaba ha ahaatee dowladda xilkeeda dhamaaday ayaa lugu eedeeyaa ineey heshiis qarsoon la gashay dalka Noorweey oo isaga waaxdiisa socdaalka sheegay ineey Soomaaliya u direen koox soo indho indheeysa xaaladaha ammaan iyo siyaasadeed si loo celiyo soomaalida. Dowladda Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan arrintaas uga hadashay. Wasiirka arrimaha dibadda C/salaan Cumar Hadliye ayaa laftiisa qiray in laanta sirdoonka iyo ammaanka ee NISA ay tahay hey’ada qura ee Noorweey la xiirtay.
Deenmark iyo Noorwaay ayaa horey u shaaciyey ineey celinayaan soomaali loo diiday sharciayda iyo kuwo kale oo laga noqonayo. Halka Iswiidhana eey booliska xudduudaha gaar ahaan gobolka Malmö maalmihii ugu dambeeyey ku raad joogeen soo qab qabashada muhaajiriin loo diiday sharci ku jooga dalka, kuwaas oo ay boolisku ka codsadeen gobolkaasi ka codsaday ineey u soo gudbiyaan xogta boqolaal muhaajiriin ah oo sharciayda loo diiday kuwaas oo ku dhuumaaleeysanaya magaaladda Malmö.
Qaladaadka Ay Haweenku Sameeyaan Xiliga Lagu Jiro Kulanka Sariirta.